AH: ဟာသတိုလေးများ - ၈
ကိုသာဗျော အိမ်က ကြက်မများ ဥ, ဥနှုန်းကျဆင်းနေသည်။ ကိုသာဗျော ကြက်ဖအသစ်တစ်ကောင်ဝယ်လာသည်။ အိမ်ရောက်ရောက်ခြင်း မနက်ပိုင်းတွင် ကြက်ဖကြီးသည် ကြက်မ ၁၅၀ ကိုမျိုးစပ် ပစ်လိုက်သည်။ ကိုသာဗျော အံသြသွားသည်။ ညနေပိုင်းတွင် နောက်ထပ် အကောင် ၁၅၀။ ပို၍ပင် အံသြသွားသည်။
နောက်တစ်နေ့ ကိုသာဗျော ခြံထဲရှိ ကြက်မများသာမက ဘဲမတွေ၊ ကြက်ဆင်မတွေ၊ ငန်းမတွေပါ ကြက်ဖလက်က မလွတ်။ ကိုသာဗျောစိုးရိမ်စပြုလာသည်။ နောက်တစ်နေ့ မနက်တွင် ကိုသာဗျော ခြံထဲသို့ အသွား သူ့ကြက်ဖကြီး လည်ကြီးကို စန့်၊ မျက်လုံးကို မှတ်ကာ သေနေလေတော့သည်။ လင်းတများကား ကောင်းကင်တွင် ၀ဲနေကြသည်။ ကိုသာဗျော သူ့ကြက်ဖကြီးဆီ ပြေးသွားသည် “သြော်.. သနားစရာကောင်းလိုက်တဲ့ ငါ့ကြက်ဖကြီး ခုတော့ သေရှာလေပြီ” လို့ ဆိုလေသတဲ့။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကြက်ဖကြီး မျက်လုံးပွင့်လာသည်
ဆိုးပေက သူ့သူငယ်ချင်း မောင်မောင့်ကို သင်ပေးသည်။
ဆိုးပေ။ ။“ဒီမှာ မောင်မောင် မင်းလိုချင်တာကို ရစေမယ့် နည်းငါသင်ပေးမယ်”
မောင်မောင်။ ။ “တယ်နိပ်ပါလားဟ လုပ်စမ်းပါဦး”
ဆိုးပေ။ ။ “လွယ်လွယ်လေးရယ်… “ခင်ဗျားလျှို့ဝှက်ချက်ကို ကျွန်တော်သိတယ်” စကားတစ်ခွန်းပဲပြောရမှာ”
မောင်မောင် ပထမဆုံး သူအဖေဆီသွားသည်
“ဖေဖေ၊ ဖေဖေ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ကျွန်တော်သိတယ်”
သားလေးက လိမ္မာတယ် ရော့ မုန့်ဖိုး ၅၀၀ယူသွား၊ ကျန်တဲ့လူတွေ ကိုလျှောက်မပြောရဘူးနော်…
မောင်မောင် သူ့အမေဆီ သွားပြန်သည်
“မေမေ၊ မေမေ့လျှို့ဝှက်ချက်ကို သားသိတယ်”
သားလေးက လိမ္မာတယ်၊ ရော့မုန့်ဖိုး ၁၀၀၀ ယူသွား၊ ကျန်တဲ့လူတွေကို လျှောက်မပြောရဘူးနော်………
မောင်မောင် သူတို့အိမ်သွား လာနေကြ စာပို့သမားထံသွားသည်
“စာပို့သမားကြီး၊ ခင်ဗျား လျှို့ဝှက်ချက်ကို ကျွန်တော်သိတယ်”
စာပို့သမားကြီး အံသြသွားသည်။ ထို့နောက် မောင်မောင်ကို ကြင်နာစွာထွေးပွေ့လိုက်သည်။ လိမ္မာလိုက်တဲ့ သားလေး.. လာ…. ဖေဖေကြီးပါးကို အာဘွားပေး။
မင်္ဂလာဦး၊ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး ပျော်ရွှင်စာ အိမ်သစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ကြသည်။ နောက်တစ်နေ့
“မောင်ရေ… ချစ်တို့ရဲ့ ရေချိုးခန်းက ရေပိုက်က ယိုနေတဲ့မောင်ရဲ့ မောင်ပြင်ပေးပါလားဟင်”
“မောင်ရေ… ချစ်တို့ရဲ့ ကားက စက်နှိုးလို့မရတော့ဘူး။ မောင်တစ်ချက်လောက် ကြည့်ကြည်ပါလားဟင်”
နောက်တစ်နေ့………. မိုးများ သည်းသည်းမည်းမည်းရွာနေသည်
“မောင်ရေ.. အိမ်ခေါင်မိုးက ရေတွေယိုနေတယ်၊ မောင်တစ်ချက်လောက် ကြည့်ကြည်ပါလားဟင်”
၁။ သင့်မှာ အိမ်မှု့ကိစ္စတွေကို ကူညီပေးဖို့၊ သင့်ကို ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးဖို့၊ အိမ်ကို ရှင်းလင်းဖို့ အဖော်မွန်ကောင်း တစ်ယောက်ရှိဖို့ အရေးကြီးတယ်။
၂။ သင့်မှာ သင်စိတ်ညစ်လာတဲ့အခါမှာ ပျော်ရွှင်လာအောင် ဟာသလေးတွေနဲ့ စိတ်အပန်းဖြေပေးတတ်တဲ့ အဖော်မွန်ကောင်း တစ်ယောက်ရှိဖို့ အရေးကြီးတယ်။
၃။ သင့်မှာ ယုံကြည့်စိတ်ချရပြီး ဘယ်တော့မှ လိမ်မပြောတတ်တဲ့ အဖော်မွန်ကောင်းတစ်ယောက် တစ်ယောက်ရှိဖို့ အရေးကြီးတယ်။
၄။ သင့်မှာ သင့်ကို ယုယကြင်နာတတ်တဲ့ အဖော်မွန်ကောင်း တစ်ယောက်ရှိဖို့ အရေးကြီးတယ်။
၅။ အရေးအကြီးဆုံးက အဲ့ဒီ မိန်းမ လေးယောက်ဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မသိဖို့ အရေးကြီးတယ်။
Posted by AH at 6/15/2012 12:11:00 PM
An Asian Tour Operator June 15, 2012 at 12:23 PM
တကယ့်စိတ် အပန်းပြေစရာလေး တွေ။ အရေးကြီးတာကို လဲ မှတ်သွားပါတယ်။
ဝေဖြိုးဟန်(အင်းစိန်) June 15, 2012 at 12:28 PM
ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) June 15, 2012 at 12:59 PM
nay oasis June 16, 2012 at 6:50 PM